पछिल्लो समयका चर्चित सर्जक प्रकाश सपुतको चर्चा देश बिदेमा चुलिएको छ । उनको लय शब्दमा बनेको ‘बोलमाया’ नामक गीतको बारेमा बजारमा सुनिएका हल्ला र ‘बोलमाया’ले पाईरहेको चर्चाका बारेमा परदेशीन्युजकी सम्पादक स्वस्तिका चिलुवालले प्रकाश सपुतसँग गरेको कुराकानिको सम्पादित अंशः
‘बोलमाया’को पछिल्लो समयको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
धेरै जनाको साझा प्रतिक्रिया दुखित बनायो भन्ने नै हो । म एक्दम खुसि छु । सबैले गीतलाई माया गरिदिनु भएको छ ।
‘बोलमाया’ले पत्रकारहरुलाई घरसम्मै पुर्यायो होईन त ?
हो । मेरो घर गाउँमा छ । जुन बागलुङको सदरमुकामबाट तीन–चार घण्टा नै लाग्छ । पोखराबाट साथीहरु जानु भएको रहिछ । बाआमाले के बोल्ने ? कसरी बोल्ने ? भनेर सोध्नु त भएको थियो । मैले खासमा बाआमालाई यसो उसो बोल्नु भनेर कुनै पनि कुराहरु भनिन ।
‘बोलमाया’ले जति माया पायो त्यति नै चुनौति थपेको मान्नु हुन्छ ? आगामी दिनहरुमा कस्ता खालका गीतहरु लिएर आउनु हुन्छ ?
चुनौति थपिएको छ । यो ‘बोलमाया’ नै पहिलो गीत होईन । म यसै क्षेत्रमा छु । यहाँ भन्दा अघि पनि धेरै गीतहरु बजारमा आइसकेका छन् । चरर, बरर बोलको गीतबाट सुन्दरादेवि लोक गीत अवार्ड जितेको छु । निरन्तर कर्म गर्दै जाने हो । कस्ता गीतहरु आउँछन् के हुन्छन् । यस गीतको विषयले छोएको छ ।
‘बोलमाया’लाई युटुव ट्रेनिङमै राखिराख्नको लागि प्रकाश सपुतले डलर खर्च गरिरहेको छ भन्ने आरोप छ नि ?
त्यो सबै हल्लाहरु हुन । सन् २०१२ मै विश्व भासिन्छ भनेर हल्लाहरु सुनिएका थिए । पछि भासिएन । जुन कुराको बारेमा पुरै जानकारी छैन् त्यसको कुराको बारेमा मानिसहरुले विभिन्न अनुमानहरु गर्ने हो । कुनैबेला प्रचण्ड्का १० वटा टाउँका छन् भनेर भनिन्थ्यो । मैले त्यस्तो प्रमोशनमा आएको हो । युटुवको भ्युउज किन्न त सकिएकाला तर दर्शको माया किन्न सकिन्न । यति धेरै श्यर हुनु, १२ हजार बढि कमेन्ट आएका छन् ।
बिदेशमा रहने नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
रुदै फोन गर्नुहुन्छ । एसएमएस गुर्नहुन्छ । रुदै गरेको भिडियो ठाउनु भएको छ । अर्को कुरा केही साथीहरुले भिसा लागेको स्थितिमा पनि बाआमाले बिदेश नजाउ भनेर रोकिएकोसम्म भन्नु भएको छ ।
साथमा तपाईको जीवनसाथी पनि हुनुहुन्छ म उहाँलाई केही कुराहरु सोध्छु…
बोलमाया हेर्नु भयो ?
अझै पनि हेरेकी छैन । हेर्न मन लागेको छैन् । नरमाईलो लाग्छ । सायद हेर्दिन होला ।
गीत सुन्न भयो त ?
गीत चाँही सुनेकी छु ।
यस्तो दुखलाग्दो गीत किन ल्याउनु भयो होला भन्ने लाग्दैन ?
त्यस्तो त लाग्दैन । वर्तमान स्थितिको बारेमा उहाँले जुन गीत बनाउनु भयो । त्यो सहिछ ।
तपाईका साथीहरुले बोलमाया हेरे फोन गर्नुभयो त ?
गर्नुहुन्छ । उहाँहरुले पनि हेर्नुसक्नु भएको छैन् । गीतको बिमोचनमा मेरो मिल्नेसाथीहरु गएका थिए । त्यो दिन बाहेक फेरी हेरेन भनेर भन्नु भएको छ । केही साथहरुले बिचभाग भन्दा उता हेर्न सकिन भन्नु हुन्छ ।
श्रीमानले यत्रो चर्चा कमाईरहँदा तपाईको नजरमा कुन स्थानको गायकको उपमाले सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
सबै गायक गायिकाहरुको आफ्नै पहिचान छ । उहाँको पनि आफ्नै पहिचान छ । मैले त सबैभन्दा राम्रो नै देख्छु ।
डेण्डी शेर्पाको ‘दुई नयन’ सार्वजनिक